Apple dia hampiakatra ny sazy ataon'ny Vondrona Eropeana amin'ny raharaha Irlanda | Vaovao IPhone
Miverina indray izahay amin'ny raharaha mampiady hevitra misy eo amin'ny Apple, ny Vondron Eropeana ary Irlandy, ary ny politikan'ny fandoavam-bola sy ny hetra any Apple any Irlandy dia miorina amin'ny fahalotoam-pitondrantena ary mihoatra ny fetran'ny varotra ara-drariny, ka nanapa-kevitra ny Vondrona Eropeana fa handray fepetra manoloana ny fitsaboana tsara toy izany, miantoka ny fandoavan'i Apple any Eropa ny hetra rehetra nampiatoany nandritra ny taona maro. Tsy tian'ny Tim Cook mihitsy ny paikady, hany ka efa manomana ny antso izy ireo mba hialana amin'ny fandoavan-ketra avy amin'ny Vondrona EropeanaNandritra izany fotoana izany, mbola nangina ihany i Ireland momba izany.
Araka ny efa fantatrareo, Apple dia namporisihina tamin'ny volana aogositra 2016 mba handoa vola tsy latsaky ny 13 miliara euro vokatry ny fanadihadiana natao tany Irlanda, firenena iray izay Apple dia nandoa manodidina ny 1% ary nampiasa ny lampihazo izy io hisorohana ny fandoavan-ketra any amin'ireo firenena sisa ao amin'ny Vondrona Eropeana, izay tsy nahitany fitsaboana tsara ary tsy maintsy namakivaky ny kaody tamin'ny fomba maharary kokoa. Nilaza ny toro-hevitry ny jeneraly Apple Reuters omaly izay hanomboka ady ara-dalàna lava amin'ity lafiny ity:
Ny Komisiona eoropeana dia tsy afaka manafika ny fahalalahan'ny Irlandy hametraka ny politikany momba ny hetra, lasa lavitra loatra izy io, raha ny tena izy, tsy misy firesahana momba izany fepetra izany nandritra ny tantaran'ny Vondrona Eropeana.
Manontany tena izy ny amin'ny fomba hiarovan'i Apple ny toerany, ny filazany ny fahalalahan'i Irlandy hitantana ny hetrany manokana, hanipy tanteraka ny baolina ary handatsaka fa kely na tsy misy ifandraisany amin'izany izy ireo. Ka tsy mora kivy i Apple ary hijoro tsy misy hafa fa ny Vaomiera EoropeanaTsy fantatray izay hiafaran'ilay raharaha, saingy mazava fa ho sahirana i Apple amin'ny famoritana zavatra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Apple dia hampiakatra ny sazy ataon'ny Vondrona Eropeana amin'ny raharaha Irlanda
Ny OCU dia manameloka ny "dokambarotra mamitaka" an'ny iPhone 7